कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् माघ २९ गतेको राशिफल « Dhankuta Khabar
कुन राशिको लागि आजको दिन कति शुभ ? – हेर्नुहोस् माघ २९ गतेको राशिफल
समय : 12:05 AM
आज श्री शाके १९४० बि.स. २०७५ साल माघ २९ गते मंगलबार इश्वी सन् २०१९ फेब्रुवरी १२ तारीख माघ शुक्लपक्ष सप्तमी तिथी ११ः०४ बजे सम्म उप्रान्त अष्टमी तिथी भरणी नक्षत्र १७ः५४ बजे सम्म उप्रान्त कृत्तिका नक्षत्र शुक्ल योग ७ः५५ बजे सम्म उप्रान्त ब्रह्म योग वणिज करण ११ः०४ बजे सम्म उप्रान्त भद्रा करण चन्द्रमा मेष राशिमा आनन्दादियोगमा मुसल योग सुर्य उत्तरायण शिशिर ऋतु अचला सप्तमी, रथ सप्तमी माघ मसान्त, देवघाटलगायत तीर्थहरूमा मकरस्नान समाप्ति लगला चुयके – ज्यो.पं. सरोज घिमिरे / धनकुटा खबर
दाम्पत्य सम्बन्धमा सुधार रहनेछ । प्रतिश्पर्दा जन्य कार्यमा समय उत्तम रहेकोछ । पारीवारिक मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय उत्तम रहेकोछ । नयाँ कार्य थालनिको योग रहेकोछ । सामाजिक कार्यमा सहभागीता जनाउने समय रहेकोछ ।
सामान्य आर्थीक अभाबको सामना गर्नु पर्ला । खराब संगतका कारण सामान्य अप्जस सहनु पर्ला । शत्रु बृद्धि हुनसक्नेछन । मनोरञ्जन मुलक सरसामानको क्षेत्रमा सामान्य खर्च हुन सक्नेछ । तात्कालिक खर्चका कारण मानसिक चिन्ताले सताउनेछ ।
पुरानो लगानि उठाउने राम्रो समय रहेको छ । मित्र जनको साथ सहयोग बाट कार्य सम्पादनमा मदत पूग्नेछ । प्रतिस्पर्दामा अबल रहीनेछ । आय मुलक कार्यको थालनि हुनेछ । नयाँ कार्यको थालनिले मनमा हर्ष पैदा गर्नेछ ।
बाणीको चातुर्यताले नयाँ मित्र प्राप्त हुन सक्छन । सामान्य चोटपटकको सिकार भईन सक्छ सजग रहनु होला । मान्यजन संगको सम्बन्ध खराब रहन सक्छ । बिद्या प्राप्ति योग रहेको छ । सन्तान सम्बन्धि समस्याले सताउने छ ।